Mayelana NATHI - Suzhou Jiarui Machinery Co., Ltd.
ISuzhou Jiarui Machinery Co., Ltd. kuyinto isethi design, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, yokuthengisa njengoba omunye professional abakhiqizi imishini plastic. Emadolobheni anamuhla asafufusa, unxantathu, owaziwa njengedolobha lasekhaya laseChina imishini yepulasitiki, i-zhangjiagang. Isikhundla sendawo siphakeme, kokubambisana kwezohwebo nakwezamabhizinisi kulula kakhulu.
Imishini yokuphinda isebenze kabusha yePlastiki kanye nemishini ye-extrusion inkampani yami inesipiliyoni seminyaka engu-20 sokukhiqiza, ihlanganise iqembu lobuchwepheshe nelobuchwepheshe, inezinto zokusebenza kahle zemishini nezinsiza ezisekelayo, inqubo yokukhiqiza ivuthiwe kakhulu. Okwamanje imikhiqizo eyinhloko ingumgayo osindayo, i-crusher yethileyi, isikhwama somgqomo esikhethekile, umshini wokushisa ongashadile / ophindwe kabili, umshini ongashadile / ophindwe kabili we-shaft wefilimu, umshini omkhulu wokushisela ipayipi, umugqa wokuphinda usebenzise kabusha i-PET, i-PE / PP yefilimu yokuhlanza kabusha ifilimu , umshini nemishini yawo yokusiza, ulayini wePlastiki wokuxhuma neminye imikhiqizo. Ngasikhathi sinye ingahlinzeka ngokukhethekile ngokuya ngezidingo zamakhasimende kanye nemishini yokuhlukanisa kabusha ephukile.
Ukuthuthukiswa kwenkampani bekunamathela kukhwalithi yokuqala, ifilosofi yokuqala yesevisi, njalo ukudala ubuchwepheshe bokukhiqiza nezinqubo zokukhiqiza; Ukuphishekela kwethu ukwenza kahle, futhi sikhulisa amandla abo njalo; Siqhubeka sithuthukisa ukuhlinzeka amaklayenti ngohlelo oluphelele nolusebenzayo lokusebenzisa kabusha ipulasitiki kanye ne-extrusion scheme.
Ekuhlanganisweni kwanamuhla komhlaba wonke, izwe ngalinye lizoba nokuhwebelana okujulile. Njengomabhizinisi waseChina, sizosekela umqondo ongcono wokuthi "kwenziwe eChina" ukukhonza amakhasimende omhlaba jikelele.
Sizophinde sizibophezele ekukhiqizeni nasekuvuseleleni kabusha imikhiqizo yepulasitiki, silethe imishini esebenza kahle futhi yokonga amandla, futhi senze ingxenye yethu ekuvikelweni kwemvelo emhlabeni jikelele. Kade silwela inkolelo yokuthi singabuyekeza ubuchwepheshe ngokushesha, sikhiqize imikhiqizo ngempumelelo enkulu futhi sisebenzise kabusha amapulasitiki kadoti imvelo.